Linux Mint 12 "Lisa" dị! | Site na Linux
Achọta dị maka nbudata nke kachasị ọhụrụ (ikpeazụ) nke nkesa GNU / Linux nke yiri ka ọ bụ ejiji: Linux Mint 12 "Lisa".
Mint gosipụtara Ubuntu na ogo Distrowatch, maka oge mbụ n'ọtụtụ afọ. Nke a gosiri na ọ bụ ezigbo mmadụ alternativa maka na-adịghị na Unity.
1 Gnome 3 na MGSE
3 Aesthetic nkwalite
4 Nchọgharị ọchụchọ
5 Linux Mint 12 "Lisa" RC Components
Gnome 3 na MGSE
MGSE (Mint Gnome Shell Extensions), bụ oyi akwa n’elu GNOME 3 nke na-eme ka o kwe omume iji interface ọhụrụ na ụzọ ọdịnala. Ihe niile MGSE nwere ike inwe nkwarụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ahụmịhe GNOME 3, mana iji ọdịdị GNOME.
MATE bụ ndụdụ nke Gnome 2, nke dakọtara na Gnome 3. Ekele dịrị MATE, ụdị abụọ nke GNOME nwere ike ịgba n'otu usoro ahụ. MATE dị na mbipụta Linux Linux Mint 12. Ndị ọrụ mbipụta CD nwere ike iwunye MATE site na ngwugwu mint-meta-mate.
MATE na Linux Mint 12
Linux Mint 12 na-eji isiokwu ọhụrụ akpọrọ Mint-Z, nke dabere na Mint-X na isiokwu Zukitwo. Dịka na nsụgharị gara aga, ndabara ndabere na-egosi ọnọdụ 3D na akara ngosi Linux Mint. Ebe ndi ozo di, tinyere foto nke India na Yellowstone National Park.
Mint Z, mmegharị nke Mint X maka GNOME 3
Nchọpụta ọchụchọ ọhụrụ nke ndabara bụ Duck Duck Go, nke ha na-eme nke ọma nyochaa na Genbeta. Duck Duck Go bụ njin ọchụchọ na-asọpụrụ nzuzo onye ọrụ. Na ntinye m na Spanish, enwere injin abụọ ọzọ: igwe nyocha RAE na Wikipedia na Spanish. Agbanyeghị ịnwere ike hazie engines ọchụchọ karịa.
Linux Mint 12 "Lisa" RC Components
Linux Mint 12 dabere na Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot. Kernel eji eme ihe bu 3.0. Banyere mmemme nke arụnyere na ndabara, anyị nwere Firefox 7 dị ka ihe nchọgharị weebụ na Thunderbird 7 dịka onye ahịa ozi.
Maka nyocha zuru ezu nke ihe dị ọhụrụ na LM 12, ana m akwado ịgụ ya hapụ ndetu.
Budata Linux Mint 12
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Linux Mint 12 "Lisa" dị!
J Igwe08 dijo
Onye na-eme ihe dị nro dị mma, ọ masịrị m, enwere m olileanya na ha ga-aga n'ihu na-azụlitekwu ya
Zaghachi J Air08
Zaghachi Facundo Chiguaihuan
Anaghị m eji Linux Mint ugbu a, mana enwere m ike iche maka nhọrọ 2:
1) Right pịa menu menu ma họrọ hazie ma ọ bụ ihe yiri ya. O doro anya na site n'ebe ahụ ọ ga-ekwe omume.
2) pịa ma dọrọ akara ngosi ka hazie ha otu kachasị masị gị?
Egwu. Agbalịrị m RC ma debe ya n'ihi na ị nwere ike ịsị na ọ na-efu efu. 11 yitụrụ Ubuntu. Ka anyị hụ ka o si bụrụ 😀
Daalụ maka akụkọ.
Na Nchọgharị Nchọgharị: «Njin ọhụrụ ahụ ... nke anyị gwara gị maka ya na Genbeta» <- ịpụghị aka, ka ọ bụ n'ebumnuche?
Zaghachi Mauricio Flores
ịdị n'otu eme nzuzu
Kwesịrị naanị mmanya menu ochie, ịkwesighi ịlaghachi na gnome 2 ọzọ. Ebe ọ bụ na nchịkọta ọhụrụ gnome dị ntakịrị karịa.
Zaghachi Daniel S
Ewere Genbeta ahụ nyocha ahụ. Emechaala m mezie ya ka ọ ghara ida agbanwe agbanwe.
Nwa agbogho onye inwere ihe o kwuru, gi nwa nkita, i gha akuko mark xD
Ezigbo ụzọ dị mma maka ndị ahụ adịghị n'otu? Ọ bụrụ na ubuntu onye ọrụ ahụ nwekwara ike iji ihe akpọrọ MATE - » http://www.upubuntu.com/2011/11/how-to-install-gnome-2-fork-mate.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UpUbuntu+%28Up+Ubuntu+-+Ubuntu+Blog%29
Anyị ga-echere ka mmelite ahụ pụta. Ruo mgbe ahụ naanị otu nhọrọ bụ ịwụnye site na ncha. Paul.